SONSAF | Ururrada Bulshada Rayidka Ah Ee Somaliland Oo ku baaqay in la sii daayo Musaharrixiinta la Xidhay.
16 Feb Ururrada Bulshada Rayidka Ah Ee Somaliland Oo ku baaqay in la sii daayo Musaharrixiinta la Xidhay.
Posted at 12:39h in Sonsaf News	by	admin
Guddoomiyaha dalladda ururrada bulshada radkayidka ah ee SONSAF Mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ay weheliyaan qaar ka mid ah guddoomiyayaasha ururrada ku bahoobay SONSAF ayaa ugu baaqay dawladda Somaliland inay xorriyaddooda u soo celiyaan laba musharrax oo dhawaan lagu xidhay Hargeysa.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay aad uga xunyihiin xadhigga labada musharrax isla markaana uu caqabad ku yahay geeddi socodka dimuqraaddiyadda Somalilaan ee curdinka ah. Dhinaca kale waxa uu guddoomiyuhu sheegay in dastuurka somalilaan qodobka 22aad u ballan qaaday qof kasta oo muwaadin ah in la doorto waxna uu dooran karo, sidaa daraaddeedna ay gef weyn tahay in loo diido qof muwaadin ah inuu is sharraxo.
Musharrax Raage Axmed Yuusuf oo u sharraxan golaha wakiillada ee Somaliland iyo musharrax Maxamuud Axmed Jaamac oo u tartamaya golaha deegaanka caasimadd isla markaana labaduba ka sharraxan xisbiga UCID ayaa dhawaan ciidamaa Somaliland xabsiga u taxaabeen.